स्वतन्त्रता के हो? , विश्वव्यापी चर्च अफ भगवान स्विजरल्याण्ड (WKG)
हामीले भर्खर हाम्रो छोरी र उनको परिवारलाई भेट्यौं। तब मैले एउटा लेखमा वाक्य पढें: "स्वतन्त्रता अवरोधहरूको अभाव होईन, तर छिमेकीलाई प्रेम नगरी गर्न सक्ने क्षमता" (Factum 4/09/49) स्वतन्त्रता अवरोधको अभाव भन्दा बढी हो!
हामीले स्वतन्त्रताको बारेमा केही उपदेशहरू सुनेका छौं, वा यस विषयमा आफैंले अध्ययन गरिसकेका छौं। मेरो लागि यस कथनको खास कुरा के हो भने त्यो स्वतन्त्रता त्यागसँग सम्बन्धित छ। जस्तो कि हामी सामान्यतया स्वतन्त्रताको कल्पना गर्दछौं, यसको हार मान्नुपर्दैन। यसको विपरित, स्वतन्त्रताको कमीलाई त्याग्नु बराबर हो। हामी हाम्रो स्वतन्त्रता मा सीमित महसुस गर्दछौं जब हामीलाई निरन्तर बाधा द्वारा वरिपरि अर्डर गरिएको छ।
यो दैनिक जीवनमा यस्तो देखिन्छ:
"तपाईंले अहिले उठ्नु पर्छ, लगभग सात बजेको छ!"
«अब यो गर्नु पर्ने हुन्छ!»
"फेरि फेरि उही गल्ती गर्नुभयो, अझ केहि सिक्नु भएन?"
"अब तपाईं भाग्न सक्नुहुन्न, आफैले आफूलाई घृणा गर्नुभयो!"
येशूले यहूदीहरूसँग गर्नुभएको छलफलबाट हामी यो धारणालाई प्रस्टै देख्छौं। अब येशूले ती यहूदीहरूलाई भने जसले उहाँमाथि विश्वास गरे
"यदि तपाईं मेरो वचनमा रहनुभयो भने, तपाईं वास्तवमै मेरो चेलाहरू हुनुहुन्छ र तपाईंले सत्यलाई चिन्नुहुनेछ, र सत्यले तपाईंलाई स्वतन्त्र तुल्याउनेछ।" तब तिनीहरूले उत्तर दिए: “हामी अब्राहामका सन्तान हौं र हामीले कसैको सेवा कहिले गरेनौं; तपाईं कसरी भन्न सक्नुहुन्छ: तपाईं स्वतन्त्र हुनुहुनेछ? येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो: ruly साँचो, म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, पाप गर्ने हरेक पापको दास हो। तर नोकर घरमा सँधै रहदैन, छोरा सँधै यो घरमा रहन्छ। त्यसोभए यदि छोराले तपाईलाई स्वतन्त्र बनायो भने तपाई साँच्चिकै स्वतन्त्र हुनुहुनेछ " (यूहन्ना .8,31..36१- .XNUMX)
जब येशूले स्वतन्त्रताको कुरा गर्न थाल्नुभयो, उहाँका श्रोताहरूले तुरुन्तै नोकर वा दासको अवस्थालाई औंल्याए। दास स्वतन्त्रताको विपरित हुन्छ, त्यसैले बोल्नु। उसले धेरै गर्नुपर्दैन, ऊ धेरै सीमित छ। तर येशू आफ्ना श्रोताहरूलाई तिनीहरूको स्वतन्त्रताको छविबाट टाढा डो .्याउनुहुन्छ। यहूदीहरू विश्वास गर्थे कि तिनीहरू आफू स्वतन्त्र नै थिए तर येशूको समयमा तिनीहरू रोमीहरूले कब्जा गरेको देश थियो र त्यसभन्दा अघि तिनीहरू प्राय: विदेशी शासनको अधीनमा र दासत्वमा पनि थिए।
त्यसोभए येशूले स्वतन्त्रता भनेको के थियो श्रोताहरूले बुझेको भन्दा एकदमै भिन्न थियो। पापको दासत्वको केहि समानताहरू छन्। जसले पाप गर्दछ उ पापको दास हुन्छ। स्वतन्त्रतामा बाँच्न चाहनेहरूलाई पापको बोझबाट मुक्त गर्नुपर्दछ। यस दिशामा, येशूले स्वतन्त्रता देख्नुहुन्छ। स्वतन्त्रता भनेको येशूबाट आउने कुरा हो, यसले के सम्भव बनाउँदछ, उसले के भन्छ, उसले के हासिल गर्छ। निष्कर्ष यो हो कि येशू आफैं स्वतन्त्र हुनुहुन्छ कि उहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। यदि तपाई स्वतन्त्र हुनुहुन्न भने तपाई स्वतन्त्रता दिन सक्नुहुन्न। यदि हामीले येशूको स्वभावलाई अझ राम्ररी बुझ्यौं भने हामी स्वतन्त्रतालाई पनि अझ राम्ररी बुझ्न सक्दछौं। उल्लेखनीय अंशले येशूको मूल स्वभाव के हो र के हो भनेर देखाउँदछ।
"यस्तो मनोवृत्ति तपाईं सबैमा बास गर्दछ, जस्तो कि येशू येशूमा पनि थियो, किनकि उहाँ ईश्वरका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ (ईश्वरीय प्रकृति वा प्रकृति), उसले बलले समात्ने डकैतीको रूपमा परमेश्वरसँग समानता देख्दैन थियो (अपरिहार्य, बहुमूल्य सम्पत्ति); होइन उनले आफैं भने (उहाँको महिमाको) एक नोकर को रूप मा ग्रहण गरेर, पूर्णतया मानव प्रकृति मा प्रवेश र आफ्नो शारीरिक प्रकृति मा एक मानव को रूप मा आविष्कार गरी " (पिलिपर्स २.–-–)
येशूको स्वभावको एउटा प्रमुख विशेषता भनेको उहाँको ईश्वरीय प्रतिष्ठानको त्याग गर्नु थियो। उनले आफ्नो महिमा "जारी" गरे र स्वेच्छाले यस शक्ति र सम्मानलाई त्यागे। उसले यो बहुमूल्य सम्पत्ति हटाएको छ र यही कुराले उसलाई मुक्तिदाता हुन योग्य बनाएको छ, जसले समाधान गर्नुहुन्छ, स्वतन्त्र पार्नुहुन्छ, स्वतन्त्रता दिनुहुन्छ, जसले स्वतन्त्रताका लागि अरूलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सुविधाको यो छूट स्वतन्त्रताको एक अत्यावश्यक विशेषता हो। मैले यस तथ्यलाई गहिरिएर व्यवहार गर्नुपर्‍यो। पावलका दुइटा उदाहरणले मलाई यसको लागि सहयोग गर्यो।
"के तपाईंलाई थाहा छैन रेसट्र्याकमा दौडनेहरू सबै भाग्दछन्, तर त्यो केवल एक जनाले विजय मूल्य प्राप्त गर्दछ? अब यस्तो प्रकारले दौडनुहोस् कि तपाईं यसलाई प्राप्त गर्नुहोस्! तर प्रतियोगितामा भाग लिन चाहने सबै जना तल निहित छन्। सबै सम्बन्धहरुमा संयम, कि एक क्षणिक माला प्राप्त गर्न को लागी, तर हामी एक अविनाशी " (२ कोरिन्थी १२: २-।)
एक धावकले एक लक्ष्य सेट गरेको छ र ऊ यसलाई प्राप्त गर्न चाहन्छ। हामी पनि यस दौडमा शामिल छौं र एक छूट आवश्यक छ। (अनुवाद आशा सबैको त्यागको यस खण्डमा बोल्दछ) यो केवल थोरै त्यागको बारेमा मात्र होइन, "सबै सम्बन्धहरूमा परित्याग" को पनि हो। जसरी येशूले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सक्षम हुन ठूलो सौदा छोड्नुभयो, त्यसरी नै हामीलाई पनि धेरै त्याग्न आग्रह गरियो ताकि हामी पनि स्वतन्त्रतामा पार गर्न सकौं। हामीलाई नयाँ जीवन शैलीमा बोलाइएको छ जुन एक अविनाशी मासुमा सदाको लागि रहन्छ; यस्तो महिमामा जुन कहिले अन्त हुँदैन न त कहिल्यै टाढा जानेछ। दोस्रो उदाहरण पहिलोसँग नजिकबाट सम्बन्धित छ। यो उही अध्यायमा वर्णन गरिएको छ।
"के म स्वतन्त्र मानिस हुँ? के म प्रेषित होइन? के मैले हाम्रा प्रभु येशूलाई देखेको छैन? प्रभुमा मेरो काम तपाई नै होइन र? के हामी खाने र पिउने अधिकारमा प्रेषितहरू हौं?" (१ कोरिन्थी,, १, र))।
यहाँ पावलले आफूलाई एक स्वतन्त्र मानिस भनेर वर्णन गर्छन्! ऊ आफैंलाई वर्णन गर्दछ जसले येशूलाई देखेको छ, जसले यस छुटकारा दिनेको पक्षमा काम गर्नुहुन्छ र जसको स्पष्ट रूपमा देखिने परिणामहरू छन्। र निम्न पदहरूमा उनले एउटा अधिकार, एउटा सुअवसरको वर्णन गरे जुन अरू प्रेरितहरू र प्रचारकहरूले जस्तै उनले पनि आफ्नो जीवन निर्वाहको लागि सुसमाचार प्रचार गरेर प्रचार गरे कि उनी एक आम्दानीको हकदार छन्। (पद १)) पावलले यो सुअवसर त्यागे। यस छूटको माध्यमबाट, उसले एउटा खाली स्थान सिर्जना गर्‍यो, त्यसैले उनी स्वतन्त्र भए र आफैलाई एक स्वतन्त्र व्यक्ति भन्न सक्थे। यस निर्णयले उनलाई अझ स्वतन्त्र बनायो। उनले फिलिपमा नगरपालिका बाहेक सबै नगरपालिकाहरूसँग यो नियमन लागू गरेका छन्। उनले यस समुदायलाई आफ्नो शारीरिक कल्याणको देखभाल गर्न अनुमति दिए। यद्यपि यस सेक्सनमा, हामी अब यस्तो स्थान फेला पार्‍यौं जुन केहि अनौंठो देखिन्छ।
"किनकि यदि मैले उद्धारको सन्देश प्रचार गरेँ भने म यसमा गर्व गर्ने कुनै कारण छैन, किनकि म एक बाध्यतामा छु; उद्धारको सन्देश प्रचार नगरेको भए मलाई धिक्कार छ!" (पद १ 14)
एक स्वतन्त्र मानिस भएकोले, पावलले एउटा बाध्यताको कुरा गरे, जुन उसले गर्नुपर्ने थियो। यो कसरी सम्भव भयो? के उनले स्वतन्त्रताको सिद्धान्तलाई अस्पष्ट रूपमा देखे? बरु मलाई लाग्छ कि उहा आफ्नो उदाहरणबाट हामीलाई स्वतन्त्रताको नजिक ल्याउन चाहानुहुन्छ। हामी यसमा पढ्न जारी राख्छौं:
"किनभने यदि मैले यो स्वतन्त्र रूपमा गरेँ भने मँ गर्न सक्दछु (दाँया देखि) ज्याला; तर यदि मैले यो स्वेच्छापूर्वक गरेँ भने यो एक भण्डारेपन मात्र हो जुन मलाई सुम्पिएको छ। त्यसोभए मेरो तलब के हो? त्यसमा, मुक्तिको सन्देशको प्रचारकको रूपमा, म सित्तैंमा यो प्रस्ताव गर्दछु, ताकि म मुक्तिको सन्देश प्रचार गर्ने मेरो अधिकारको प्रयोग गर्दिन। किनकि मँ सबै मानिसहरुबाट स्वतन्त्र छु (नि: शुल्क), म आफैँलाई सबै को सेवक बनाएँ ती मध्ये बहुमत प्राप्त गर्न। तर म यी सबै चिकित्सा कार्यको खातिर गर्दछु, ताकि म पनि यसमा बाँड्न सकूँ "। (१ कोरिन्थी:: १-1-१-9,17 र २))
पावललाई परमेश्वरबाट अर्डर आयो र उनलाई राम्ररी थाँहा छ कि उनी यो परमेश्वरबाट बाध्य छन्। उसले यो गर्नुपर्‍यो, ऊ यसबाट लुक्न सक्दैन। उनले आफूलाई एक भण्डारे वा प्रशासकको भूमिकामा देखे जुन ज्यालाको कुनै दावी छैन। यद्यपि यस परिस्थितिमा पावलले स्वतन्त्र ठाउँ पाएको छ, यस बाध्यताको बाबजुद उनले स्वतन्त्रताको ठूलो ठाउँ देखेका थिए। उनले आफ्नो कामको लागि क्षतिपूर्ति माफ गरे। उनले आफैलाई नोकर वा दास पनि बनाए। उनले परिस्थितिलाई छाँटकाँट गरे; अनि मानिसहरू जसलाई उनले सुसमाचार प्रचार गरे। क्षतिपूर्ति छोड्दा, उहाँ धेरै व्यक्तिहरूमा पुग्न सक्षम हुनुभयो। मानिसहरु जसले उनको सन्देश स्पष्ट सुने कि सन्देश आफैंमा अन्त थिएन, संवर्धन वा धोखाधडी। बाहिरबाट हेर्दा, पावल त्यस्तो मानिस जस्तो देखिन्थ्यो जुन सधैं दबाब र प्रतिबद्धतामा थियो। तर पावल भित्र बाँधिएनन्, उनी स्वतन्त्र थिए, स्वतन्त्र थिए। त्यो कसरी भयो? हामी सँगै पढ्ने पहिलो खण्डमा एक क्षण फर्कौं।
"येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो:" साँचो, साँचो म तिमीलाई भन्दछु: पाप गर्ने प्रत्येक मानिस पापको दास हो। तर दास सधैंभरि घरमा बस्दैन, र छोरा सदासर्वदा रहिरहन्छ "। (यूहन्ना .8,34..35-)
यहाँ येशूले "घर" भनेको के हो? उसको लागि घरको अर्थ के हो? एउटा घरले सुरक्षा बताउँछ। आउनुहोस्, येशूको भनाइलाई विचार गरौं कि उसको बुबाको घरमा धेरै अपार्टमेन्टहरू परमेश्वरका सन्तानहरूका लागि तयार भइरहेको छ। (यूहन्ना १)) पावल जान्दछन् कि ऊ परमेश्वरको सन्तान हो, ऊ अब पापको दास हुँदैन। यस स्थितिमा ऊ सुरक्षित थियो (छाप लगाइए?) उनको कामको लागि क्षतिपूर्ति माफीले उनलाई परमेश्वर र सुरक्षाको नजिक ल्यायो जुन केवल परमेश्वरले मात्र व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। यस स्वतन्त्रताको लागि पावलले कडा परिश्रम गरे। विशेषाधिकार त्याग्नु पावलको लागि महत्त्वपूर्ण थियो किनभने यसले उनलाई ईश्वरीय स्वतन्त्रता प्रदान गर्‍यो, जुन परमेश्वरको सुरक्षाले देखाउँथ्यो। पावलले यस पार्थिव जीवनमा यस सुरक्षाको अनुभव गरे र यसका लागि र शव्दहरूका साथ आफ्ना पत्रहरूमा बारम्बार परमेश्वरलाई धन्यवाद दिए "ख्रीष्टमा" औंल्याए। उहाँलाई ईश्वरीय स्वतन्त्रता केवल उहाँको ईश्वरीय राज्यको त्यागले मात्र सम्भव भएको हो भनेर उहाँलाई राम्ररी थाहा थियो।
छिमेकीलाई प्रेम गर्नु हुँदैन भन्ने अभिव्यक्तिले स्वतन्त्रतालाई बुझाउँदछ।
यो तथ्य हाम्रो लागि प्रत्येक दिन स्पष्ट हुनुपर्दछ। येशू, प्रेरितहरू र प्रथम इसाईहरूले हामीलाई उदाहरण दिए। तिनीहरूले देखेका छन् कि तिनीहरूको त्याग व्यापक सर्कलमा जानेछ। धेरै मानिसहरूलाई अरूको प्रेमको त्यागले छोयो। तिनीहरूले सन्देश सुने, ईश्वरीय स्वतन्त्रतालाई स्वीकारे, किनकि उनीहरूले भविष्यमा हेरे, जस्तै पावलले भने:
"... कि उनी आफैंले सिर्जनालाई अनन्तताको बन्धनबाट स्वतन्त्र गरिनेछ स्वतन्त्रता जुन परमेश्वरको सन्तानहरूले महिमाको राज्यमा पाउनेछन्। हामीलाई थाहा छ कि सम्पूर्ण सृष्टि अझै पनि चारै तिर उस्काउँदछ र पीडाको साथ नयाँ जन्मको प्रतिक्षामा छ। तर ती मात्र होइन, आफैं पनि जोसँग पहिले नै पहिलो उपहारको रूपमा आत्मा छ, हामी भित्र पर्खिरहेका छौं (स्पष्ट हुँदैछ) छोराको, अर्थात् हाम्रो जीवन को छुटकारा " (रोमी .8,21.२23-२XNUMX)
परमेश्वरले आफ्ना बच्चाहरूलाई यो स्वतन्त्रता दिनुहुन्छ। यो एक विशेष हिस्सा हो जुन परमेश्वरका सन्तानहरूले प्राप्त गर्दछन्। भगवानका बच्चाहरूले परोपकारका लागि लिने त्यागलाई सुरक्षा, शान्त र निर्ममताले परमेश्वरबाट आयो भन्दा अधिक क्षतिपूर्ति दिइयो। यदि एक व्यक्तिसँग यो सुरक्षाको अभाव छ भने, तब उसले स्वतन्त्रताको खोजी गरिरहेको छ, छुट्टिने छुट्टी मुक्तिको रूपमा प्रच्छन्न। ऊ आफूलाई निर्धारण गर्न चाहन्छ र यसलाई स्वतन्त्रता भन्छ। कति शरारत भइसकेको छ यो। दुःख, आवश्यकता र खालीपन जुन स्वतन्त्रताको गलतफहमीबाट उत्पन्न भएको हो।
"नवजात शिशुहरू जस्तै, समझदार, अनियंत्रित दुध चाहान्छ (हामी यस दुधलाई स्वतन्त्रता भन्न सक्छौं) ताकि यदि तपाईं भगवान् दयालु हुनुहुन्छ भने यदि तपाईं यो मार्फत आनन्दमा बढ्न सक्नुहुन्छ। उहाँ कहाँ आउनुहोस्, जीवित ढु stone्गा जुन मानिसहरूले अस्वीकार गरे, तर परमेश्वरसामु चुनिए, अनमोल छ, र आफैंलाई आत्मिक घरको रूपमा जीवित ढु stones्गाहरूजस्तै बनाउन दिनुहोस्। (जहाँ यो सुरक्षा आउँदछ) एक आध्यात्मिक पुजारीको दलमा आध्यात्मिक बलिहरू चढाउन (त्यो माफी हुनेछ) जुन येशू ख्रीष्टमार्फत परमेश्वरलाई खुशी पार्दछ! " (१ पत्रुस १: १-२)
यदि हामी ईश्वरीय स्वतन्त्रताको लागि प्रयास गर्दछौं भने हामी यो अनुग्रह र ज्ञानमा बढ्छौं।
अन्तमा, म लेखबाट दुई वाक्य उद्धृत गर्न चाहन्छु जुनबाट मैले यो उपदेशको लागि प्रेरणा पाएँ: reedom स्वतन्त्रता अवरोधहरूको अभाव होईन, तर छिमेकीलाई प्रेम नगरी गर्न सक्ने क्षमता हो। स्वतन्त्रताको जबरजस्ती परिभाषा गर्ने जो कोही जबरजस्तीको अभावको रूपमा व्यक्तिलाई सुरक्षा र कार्यक्रममा निराश हुनबाट जोगाउँदछ।
स्वतन्त्रता अवरोधहरूको अभाव भन्दा बढी हो